Misaotra, Squidoo! (Raiso an-tsoratra ny Shoemoney) | Martech Zone
Misaotra, Squidoo! (Mariho Shoemoney)
Alatsinainy 26 Febroary 2007 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nanaitra ahy ny spam sasany momba ny bilaogy mazava ho azy… ny URL nalehany dia tena Squidoo solomaso Raha misy olona eto amin'ity kaontinanta ity izay tsy mahazaka Spam dia mety Seth Godin, Mpanoratra ny Fivarotana fahazoan-dàlana ary mpanorina ny Squidoo.
Fanamarihana ho an'ireo Spammers: Squidoo angamba tsy ny toerana tsara indrindra hananganana fivarotana.
Na izany na tsy izany, nazerako tsotra fotsiny i Squidoo fanamarihana tsara fa nodinihiko ny mason-tsivana resahina ary tsapako fa nisy spammer tao anaty sambo. Androany (Alatsinainy izao) dia nahazo fanamarihana tsara avy amin'ny ekipa tao Squidoo aho fa nijery ireo masinin'ireo mpikambana izy ireo ary mazava ho azy fa napetraka ho lohalaharana ho an'ny marketing Affiliate azon'ny Spam. Nosakanan'izy ireo ny kaonty. Nanamarina aho ary tsy eo intsony.
Tamin'ny herinandro lasa, mety efa naheno ilay “lehibe hatao” ianao momba an'i Shoemoney nesorina tao amin'ny MyBlogLog rehefa nandefa ny User ID an'ny mpikambana hafa tao amin'ny tranokalany izy… Lesoka amin'ny maodely tsiambaratelo MBL. Niverina tamin'ny toerany i Shoemoney taorian'ny fanamarihana iray avy amin'ny MBL tao amin'ny bilaogin'izy ireo momba ny tranga sy ny valiny.
Ity ny anjarako. Tsy manana zavatra manohitra an'i Shoemoney aho ary azo antoka fa tsy manana zavatra manohitra ny MyBlogLog aho. MyBlogLog dia fitahiana lehibe ho an'ny bilaogiko sy ny hafa noho ny fampahafantarana azony taminay. Na izany aza, hiteny aho izao… Mino marimarina aho fa rehefa nilatsaka i Shoemoney, dia satria MBL niahiahy momba ny tsiambaratelon'ny bilaogera hafa satria i Shoemoney dia namoaka karatra 3 ary avy eo nanampy hafa.
Tsy mino an'izany aho MBL nanana safidy… hatraiza ny halehiben'i Shoemoney? Hametraka zato any ve izy? Arivo? Moa ve izy nanoratra karazan-tsindrona SQL tsindrona izay nisoratany ny angon-tsoratry ny ID? MBL Azo antoka fa tsy nahalala ka notapahin'izy ireo… haingana. Tsara ho antsika rehetra izany.
Tsy ny fanasaziana an'i Shoemoney, fa ny fiarovana anay. Tsy zavatra tsara ve izany? Tsy izany ve no tadiavintsika? Tao anatin'ny adiny iray dia nanomboka niaro tena ny mpivarotra iray izay mety nanakana ny fanafihana fiarovana.
… Miverina any Squidoo, Shoemoney - azafady mariho:
Nanao tatitra tamin'ny orinasa iray aho ary nomeko fotoana izy ireo hamaly sy hamaly. Nahazo mailaka fanamafisana aho izay nisaotra ahy tamin'ny fanolorany izany ho azy ireo, nanadihady momba izany izy ireo ary nampanantena ny hamaha izany ara-potoana. Rehefa tonga tany an-trano androany aho dia nanamarina ary lasa ilay mpampiasa sy ny masom-panahiny.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, rehefa mahita lavaka fandriam-pahalemana na olana amin'ny vokatra ianao, dia tokony hilaozan'ny mpampiasa namanao ny vaovao ara-potoana ara-potoana ary omena fotoana izy ireo hihetsika. Hindsight dia 20/20, fa ho nanaja bebe kokoa an'i Shoemoney aho raha namaky ny Marketing Pilgrim bilaogy izay niarahan'i Shoemoney niasa tamin'ny MyBlogLog hametrahana lavaka fiarovana ny alina talohan'io.
Shoemoney dia mety ho nitory ny fandrosoana, araka izay azo atao MBL ary samy afaka nilaza izy roa fa hatramin'ny ora nanaovana tatitra ka hatramin'ny ora fanitsiana dia adiny iray latsaka. Raha tsy mihetsika izy ireo, dia arofano tanteraka! Aza atao apetaka anefa ny loaka, atsofohy ary andraso izay hahitana azy. Mahatsiravina ho an'ny rehetra izany.
Amin'ny alàlan'ny fitaterana ny olana sy ny fiandrasana ny valiny, mety tsy niteraka fanakorontanana firy izany, nanalavitra ankivy ankivy, nisoroka fanehoan-kevitra marobe an-tapitrisany manerana ny bilaogy marobe, ary hamonjy ireo mpampiasa ireo amin'ny fisehoan'ny ID azy ireo… fandresena ho an'ny rehetra. Nisaotra an'i Shoemoney aho ary nisaotra MBL. Tokony ho nampiseho fa samy mitady anao sy izy ireo aho.
Oh eny… misaotra, Gil (avy amin'ny Squidoo). Misaotra, Seth! Mankasitraka anao aho nanokana fotoana hanitsiana ity olana ity ary mijery antsika rehetra.
PS: Tsy mitady ady afo aho hanombohana. Manaja an'i Shoemoney aho - superpower an'ny bilaogera manana mpanaraka mahatalanjona izy. Manana talenta izy ary tena nahomby. Manantena aho fa hanana ny antsasaky ny fanambarana fa indray andro any. Te-hapetraka eo fotsiny ny fahitako ahy ary manantena aho fa hamerina handinika ny fomba fiasa izy rehefa misy zavatra toy izany amin'ny ho avy. Tsy isalasalana fa hahita olana fanampiny amin'ny fampiharana hafa izy… Manantena aho fa hanampy azy amin'ny fiarovana antsika rehetra!
Inona no nitranga tamin'ny tsingerintaona nahaterahanao?
26 Mey 2007 tamin'ny 8:06 hariva
Matetika aho tsy mandray anjara amin'ny flamewars… milentika be loatra ary tsy mahazo tombony amin'izany =)
Betsaka ny tantara tsy fantatrao sy ny zavatra mitranga ao ambadiky ny zava-misy fa ny zavatra mybloglog dia tamin'ny herinandro lasa teo 😉
26 Mey 2007 tamin'ny 8:10 hariva
Misaotra nitsidika! Tena ankasitrahako izany ary marina ny anao - antoko fahatelo fotsiny aho amin'izany ka mety tsy very hevitra ny fahitako azy.
Tena ankasitrahako ny tsy fandraisanao anjara amin'ny ady afo, hajaiko ireo bilaogera manalavitra ny fifandirana (ary tsy izany mihitsy no anton'izany).
Manantena fotsiny aho ny fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny vokatra sy ny olona, ​​ny fampiasana bilaogy ary ny polipitra mpampijaly tsara, ary ny fanomezana ny olona ny tombotsoan'ny fisalasalana hanao tsara.
Tsara ny nandrotsaka ny MBL vetivety teo. Manantena aho fa efa milamina ny raharaha.
Misaotra indray mitsidika! Manantena aho fa hiverina.
26 Mey 2007 tamin'ny 11:05 hariva
Ity lehilahy ity dia azo sokajiana ho lesoka hadalana lehibe indrindra. Ireo zavatra kely tsy eritreretintsika indraindray dia manenjika antsika indray. Tsy misy hevitra hafa noho ny hadalana tafiditra… ..
27 Mey 2007 tamin'ny 8:23 hariva
Hevitra tsara nolazainao tao!